Maitiro ekusarudza ndiani anogona kupindura kune edu matsamba pa Twitter | IPhone nhau
Chimwe chezvinodiwa zvikuru zvevashandisi veTwitter chagara chiri uye chinoramba chiri mukana we edit tweets, sarudzo iyo musoro weiyi social network uye mubatsiri, Jack Dorsey, anoramba kuitisa sezvo zvaizoreva shanduko huru muhumwe hwepuratifomu iyi.
Asi izvi hazvireve kuti maficha matsva haana kuunzwa. Kusiyana neFacebook (izvo zvese zvainoita kuteedzera mamwe mapuratifomu) paTwitter vanodzidza mafomura matsva ekukurudzira kusangana kwevashandisi. Yekupedzisira basa inotibvumidza isu kusarudza ndiani anogona kupindura kune edu matsamba.
Iri basa nyowani rinotibvumidza isu kumisikidza vanhu vanogona kupindura kune edu matsamba pa Twitter:
Wese munhu (chero mushandisi anoverenga chinyorwa chako anogona kukupindura).
Vanhu chete vaunotaura.
Sarudza ndiani anogona kupindura ma tweets edu
Iyi sarudzo inongowanikwa chete patinonyora nyowani tweet, hazviwanikwi kana isu tikapindura kune tweet yakatumirwa nemumwe munhu (zvirinani panguva yekutsikisa iyi dzidziso).
Chinhu chekutanga kuita kuvhura yepamutemo Twitter application (iri basa inongowanikwa chete mune yepamutemo app uye kwete mumatatu mapato akadai Tweetbot kana Twitterrific)
Tevere, tinya pane bhatani Nyora tweet.
Isu tinonyora iwo mameseji emessage uye tinya pa Chero ani anogona kupindura, kusarudza kuti ndevapi vanhu vanogona kupindura kubhuku redu: Wese, Vanhu vaunotevera kana Ivo chete vanhu vaunotaura.
Kana iyo tweet yaburitswa, kana isu tavimbisa muyero wekudyidzana, izvi icharatidzwa pazasi peiyo tweet.
Iyi ficha yatanga kubuda mazuva mashoma apfuura, saka kana usati wawana izvozvi, hazvifanirwe kutora nguva kuti zviitekunyanya pavhiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekusarudza ndiani anogona kupindura kune edu matsamba pa Twitter
Isu takaedza bhatiri rekunze reGREEN ne20.000 mAh uye Kuendesa Simba